Fampiasam-bola Mifantoka aty Afrika ny indostria sinoa
Fitrandrahana harena an-kibon’ny tany Ny fanjakana indray no ananan’ny QMM 92 tapitrisa dolara
Manan-karena an-kibon’ny tany ny firenena ka nahoana isika no mahantra? Hitohy tahaka izany foana ve ny fitantanana ny firenena sa misy fotoana tsy maintsy handinika sy hametraka paiakady vaovao?
Fizahan-tany Mikatso tanteraka
Mamerina ny antso efa nataony hatramin` izay ireo mpisehatra amin` ny fizahan-tany manoloana ny olana goavana sedrain` izy ireo vantany vao nanomboka ny krizy ara-pahasalamana.
Dr jean-Louis Robinson “Hanampy an’i Madagasikara hiala amin’ny fahantrana i Sina”
Tontosa tamin` ny herinandro lasa teo ny fivorian’ny Antenimieram-pirenena entim-bahoaka (ANP) any Sina.
Ministeran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ara-dalàna ny fanesorana ireo tale roa
Nofoanana nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 17 aprily teo ny didim-panjakana nanendry ny Tale Jeneralin` ny “Contrôle Financier” sy ny ny tale misahana ny “comptabilité publique” eo anivon’ny ministeran’ny toe-karena sy ny fitantanam-bola.
Minisitry ny Indostria, Varotra ary ny Asa tanana « Betsaka ny asa natao ary maro no mbola miandry »
Mbola maro be ireo andraikitra miandry eo anivon’ny Minisiteran’ny Indostria, Varotra ary ny Asa tanana (MICA) na dia efa nisy aza ny natomboka hoy ny
Sehatra tsy miankina Vahaolana matotra sy haingana no ilaina
Nampanantena ny Filoham-pirenena fa handray ireo sehatra tsy miankina sy ireo sehatra hafa mifaningotra amin’ny toekarena.
Sehatra tsy miankina Hisy drafi-panampiana avy amin` ny fanjakana
Mitentina 19 miliara ariary ny fatiantoka ho an` ny Fanjakana Malagasy eo amin` ny fandoavan-ketra tokony alohan` ireo orinasa.
Miara-miasa akaiky amin`izao ny Antenimieran’ny indostria aty Afrika sy any Sina. Fampiasam-bola goavana indrindra ataon’ny indostria sinoa aty Afrika ny famatsiana angovo sy ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany,
handresen-dahatra ny mpampiasa vola hafa maneran-tany eo amin’ny sehatry ny indostria. Fantatra aloha izao ny fahazotoan’i Sina miditra aty Afrika na ny fanjakana sinoa na koa ireo sehatra tsy miankina sinoa. Manomboka amin’ny orinasa madinika hatramin’ny indostria lehibe. Anisan’ny misongadina ny Power China, ny Sinohydro, ny Sinopec, ny Sinochem, ny Zhenhua Oil, ny China Minmetals, ny Shenergy Group. Mitombo hatrany ny fampiasam-bola ataon’ny Sinoa, toy ny hita any Guinée Equatoriale, amin’ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany toy ny volamena, diamondra, vy, solika, gazy... Nosoritan’ny Antenimieran’ny indostria aty Afrika ny tokony handrafetan’ny minisiteran’ny Harena ankibon’ny tany sy ny solika politika mazava mifanaraka amin’ny tsena iraisampirenena sy ny fifaninanana amin’izany. Vonona ny Antenimieran’ny indostria hanampy ny fitondram-panjakana sy ny orinasa afrikanina misintona ireo mpampiasa vola hanangana sehatra matanjaka, hamoronana asa sy hisian’ny fampandrosoana.